Shirgudoonka Golaha Wakiilada Soamaliland oo Kulan La yeeshay Baarlamaanka Faransiiska | Somaliland.Org
Shirgudoonka Golaha Wakiilada Soamaliland oo Kulan La yeeshay Baarlamaanka Faransiiska
November 25, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Shirgudoonka Golaha Wakiilada Somaliland oo socdaal shaqo ku maraya dalka Faransiiska ayaa kulamo la yeeshay Baarlamaanka wadankaasi, sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Wakiilada.
Warsaxaafadeedka laga soo saaray socdaalka shirgudoonka Wakiiladu wuxuu u dhignaa sidan:-
“Salaasadii 23/12/2010 waxa xarunta baarlamaannka Yurub ee magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska si balaadhan loogu soo dhaweeyey wefdigii ka socday baarlamaanka Somaliland ee uu Hoggaaminayey Md Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo Guddomiye Ku Xigeenka koowaad Md Cabdi-casiis Maxamed Samaale. Waxa kale oo wehelinayey weftiga Md Cumar Yuusuf Xuseen ergayga JSL ee dalka Jarmalka iyo dalalka Yurubta bari iyo Muxyadiin Axmed A Gaboose, Wakiilka Somaliland ee dalka Talyaaniga.
weftiga Baarlamaanka Somaliland waxa lagu soo dhaweeyey qado marti sharaf ah, ka dibna waxa lagu soo dhaweeyey qol ka mid ah qololka shirarka ee baarlamaanka Europr oo ay goob joog ka ahaayeen Gudiddda Arrimaha Dibedda ee Baarlaanka Yurub iyo mudanyaal kale oo u yimi inay dhegeystaan warbixinta wafdiga iyo inay su,aalo wediiyaan.
weftiga waxa qolka shirarka ku soo dhaweeyey waaxda Protocol-ka iyo Mudane Fiorella PROVERA, Vice Chairman of the Committee on Foreign Affairs oo madaxweyne Cigaal (AHUN) ku maamuusay baasaaborka Somaliland welina sita. Fadhiga waxa ka soo qayb galay in ka badan labaatan (20) Mudane. waxa aad uga dhex muuqday mudane u dhashay dalka Ingiriiska oo ka tirsan Xisbiga talada haya ee CONSERVATIVE-KA magaciisana la yidhaa DR CHARLES TANNOCK (MEP).
Gudoomiyaha ayaa warbixin dheer oo ku saabsan Somaliland oo ka hadlaysa taariikhda halgankii, dib ula soo noqoshada xoriyadda, nabadeynta iyo dib u dhiska, dimqiraadiyadda iyo maamula wanaaga iyo kaalmada Somaliland uga baahan tahay bulshada caalamka iyo aqoonsiga Somaliland.
Mudanaayaashu waxay weftiga waydiiyeen su’aalo badan kuwaas oo sii shaafiya looga wada jawaabay. Kulanka waxa laga qaaday documentiga iyo muuqaal ah iyo mid qoraal ah.”
Previous PostXisbiga UCID Oo Xukuumada U Soo Jeediyay In Xilka Laga Qaado Wasiirka DaakhiligaNext PostWasiirka Daakhiliga Oo Tafaasiil Ka Bixiyay Kiiska Ninka Jarmalka Ah	Blog